Rodrigo Duterte: Waxaan dilay ilaa saddex qof balse ma aqaan inta xabbadood ee ka soo baxday qorigayga | Biyoguurenews.com
Home Wararka Rodrigo Duterte: Waxaan dilay ilaa saddex qof balse ma aqaan inta xabbadood...
Rodrigo Duterte: Waxaan dilay ilaa saddex qof balse ma aqaan inta xabbadood ee ka soo baxday qorigayga
Rodrigo Duterte ayaa loo doortay madaxweynaha dalka Filibiin, sannadkii 2016-kii, isagoo si weyn ugu guuleystay ballanqaadkii la dagaalanka dambiyada iyo musuqmaasuqa.
Tan iyo markaas wuxuu ku hawlanaa doodo ku saabsan arrimo murugsan oo la xiriira dagaalka dhiigga badan ku daatay ee maandooriyaha iyo hadalladiisii ​​oo dad badan u arkaan muran iyo sharaf dhac.
Waxaa kale oo uu la kulmay cambaareyn kaga timid dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ee caalamka oo u arka in badanaa siyaasadihiisa ay ku xadgudbaan xuquuqda aadanaha.
Inkasta oo lagu dhaliilay falalkiisa oo ay cambaareeyeen beesha caalamka, haddana wuxuu caan ka sii noqonayaa dalkiisa Filibiin.
Gowraca dadka isticmaala daroogada
Sanadihii ugu horreeyey ee uu xukunka qabtay Duterte, waxaa calaamad u ahaa caburin aan kala joogsi lahayn oo lagu hayay dadka lagu eedeeyo iibinta ama isticmaalka daroogada.
Wuxuu ugu baaqay shacabka iyo booliiska inay xoojiyaan dadaalkooda ku aaddan sidii wax looga qaban lahaa, oo ay ka mid yihiin dilka tuhmanayaasha iyo kumannaan qof oo la dilay ka dib markii lagu soo eedeyay in sharciga ay gacantooda ku qaateen.
Iyada oo in ka badan 3 milyan oo daroogo isticmaala ay ku sugan yihiin Filibiin. Madaxweyne Duterte ayaa sheegay in uu ‘ku farxi doono in uu gowraco kuwaasi’.
Madaxweynaha ayaa sheegaya in mowqifkiisa adag uu muhiim u yahay ciribtirka ka ganacsiga daroogada sharci darrada ah isla markaana uu u arko inay suuragal tahay oo uusan ka quusan, isagoo ku dhaaranaya inuu ‘dilayo’ qof walba oo ku lug leh ka ganacsiga daroogada.
daroogada, ka dib markii uu xukunka qabtay waxaa la sheegay in ku dhawaad ​​6,000 oo qof ay dileen Booliiska, saraakiisha sharci fulinta iyo askar laga soo kireystay dibadda.
Qaramada Midoobay, Kaniisadda Kaatooligga, Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa marar badan lagu qasbay in ay cambaareeyaan siyaasadaha hoggaamiyahan, oo ka hor imaanaya xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah.
Dhaqdhaqaaqayaasha maxalliga ah ayaa sidoo kale dhalleeceeyay dilalka joogtada ah ee ka socda dalka Filibiin.
Wuxuu mar qirtay inuu dad gacantiisa ku dilay
Mid ka mid ah wareysiyadii ugu naxdinta badnaa ee BBC ka qaadday Madaxweyne Duterte, dabayaaqadii 2016, ayuu ku qirtay inuu mar toogtay oo uu dilay saddex qof, intii uu ahaa duqa magaalada Davao.
Wuxuu yiri: “Waxaan dilay ilaa saddex qof… ma aqaan inta xabbadood ee ka soo baxday qorigayga, way dhacday mana ka been sheegi karo arrintan.”
Hadallada kakan ee Duterte iyo kaftankiisa la dhibsado
In kasta oo ay sii kordhayaan dhalleeceynta, haddana Duterte, oo ku caanbaxay inuu sheego hadallo murugsan, ayaa ka jawaabayay eedeymaha isaga oo muujinaysa adkeysigiisa.
Wuxuu mar ku hanjabay inuu ka baxayo Qaramada Midoobay, markaas ka dib ayuu sheegay inuu kaftamayo wuxuuna ku tilmaamay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo markaas ahaa Ban Ki-Moon “mid doqon ah”.
Waxa kale oo uu ku tilmaamay midowga Yurub (EU) “munaafiqiin” isagoo jeedinayay khudbadiisa oo waliba farta dhexe tilmaamaya, taas oo lagu tilmaamay aflagaado.
Wuxuu mar ku tilmaamay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama “canug dhilleysi ku dhashay”, laakiin markii dambe wuxuu muujiyay niyad jab ka markii Obama uu joojiyay la kulankiisa.
Madaxweyne Duterte ayaa ku kaftamay in isagoo weli ah duqa koonfurta Davao uu jeclaan laha inuu noqdo qofkii ugu horreeyay ee kufsi u geysata adeegayaashii Australia ee lagu dilay mid ka mid ah rabshadihii xabsiga.
Previous articleXildhibaan Maydhane Muxuu Ka Yidhi Guusha Mucaaradka
Next articleIsu-soo baxii Reer Laascaanood+Dareenka Reer Awdal ee Shirgudoonka Cusub ee Barlamaanka Cusub ee S/land